भाटभटेनीको ठगी धन्दा नम्बर ३ : ४०७ रुपैयाँ पर्ने सामानलाई ४ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ ९६ पैसा ! – Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
भाटभटेनीका अनेकौं ठगीका घटनाहरु बाहिरिएका बेला अर्को ठगीको यस्तै घटना सार्वजनिक भएका भएको छ । बिक्रम नाम गरेका एक ग्राहकले भाटभटेनीले आफुलाई ठगेकोबारे माइसंसार डटकममा यस्तो ब्लग लेखेका छन् ।
सुपरमार्केट नेपालको नाम चलेको ब्रान्ड हो। एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा यसको सुपरस्टोर छ । त्यही मध्येको एक कलंकीमा शनिबार सपिङ गर्दाको अनुभवबाट तपाईँलाई सचेत गराउँदैछु- ध्यान दिनुस् नत्र ठगिनु होला ।
शनिबार राति सपिङ गर्ने क्रममा सामान लिँदालिँदै २५ थोक पुगेछ । स्टोर बन्द हुने बेला भइसकेको थियो। काउन्टरमा बसेकी कर्मचारीले एक-एक गर्दै सबै साामानको कोड रिडिङ गर्दै कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दै बिल निकालिन्- ११ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ ९६ पैसा ।
हामीले डेबिट कार्डबाट भुक्तान गर्‍यौँ र सामान लिएर निस्कियौँ । भोलिपल्ट बिहान घर पुगेर बिल हेर्दा पो झसङ्ग भइयो।
बिलको २५ औँ नम्बरमा ४ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ ९६ पैसाको सामान रहेछ । एउटाको ४०७ रुपैयाँ पर्ने सामान १२ वटा के लिएछौँ भनेर अचम्मै लाग्यो । नाम चेक गर्दा थाहा भयो त्यो त शिशाको गिलास पो रहेछ ।
यो गिलास ६ वटा भएको सेटको ४०७ रुपैयाँ ८ पैसा मूल्य हुनुपर्नेमा उसले त एउटाकै ४०७ रुपैयाँ इन्ट्री गर्दै छ/छ वटाको दुई सेटको १२ वटा बनाउँदै ४ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ बिल बनाएको रहेछ ।
अर्थात् दुई सेटको ८१४ रुपैयाँ १६ पैसा हुनुपर्नेमा ४ हजार ७० रुपैयाँ ८० पैसा पो बढी बिल गरेको रहेछ ।
भोलिपल्ट त्यहाँको अफिसमा फोन गर्दा बिल र सामान लिएर आउनुस् भनियो। साँझतिर त्यहाँ पुग्दा गल्ती भएको स्वीकार गरे उनीहरुले। यहाँसम्म त ठीकै थियो। अचम्म त के लाग्यो भने उनीहरुको गल्तीको सिकार हामी उपभोक्ता हुनुपर्ने रे । गल्ती हो, स्वीकार पनि भइसक्यो । तर त्यो उनीहरुले बढी लिएको रकम फिर्ता भने दिन मिल्दैन रे । त्यति नै रकमको सामान अरु लिइदिनुस् न रे । लानुपर्ने जति सामान हिजै लगिसकियो, अब के लाने? यसो भन्दा पनि भएन । उनीहरुको हिसाब मिल्दैन पो भन्न थाले ।
त्यो हाम्रो समस्या हो? गल्ती उनीहरुको भएपछि र त्यसलाई स्वीकार पनि सकेपछि फेरि ग्राहकलाई नै त्यो गल्तीको भार बोकाउनु पर्ने के खालको नियम तपाईँहरुको हो यो? यस्तो नियमले तपाईँहरुप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ भन्ने ठान्नुभएको छ ?
यसरी आफुले गल्ती गर्ने र गल्ती भएको स्वीकारेपछी पनि रकम फिर्ता दिन आनाकानी गर्नु र त्यसवापतको अरु सामान नै लिएर जानु भन्नु ठगी भएन र ?
प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७३, बिहीबार